Meizu Pro5သည် Geekbench ရှိ Galaxy Note5ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည် Androidsis
Meizu သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်မကြာမီ၎င်း၏ Meizu Pro5တွင်နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် terminal ကိုစတင်မိတ်ဆက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ စက်ကိရိယာကိုစက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ပေကျင်းတွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည့်ပွဲတွင်တင်ဆက်လိမ့်မည်။
ဒီ device ဟာ high-end terminal တစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပြီး5x5pixel မြင့်တဲ့ resolution ကိုအောက်မှာ ၅.၅ လက်မဖန်သားပြင်ရှိလိမ့်မယ်။ တရားဝင်တင်ဆက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်စက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးမှုအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဤ terminal သည်ကျော်ကြားသော Geekbench application ၏စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောရမှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ The Meizu Pro5သည်ပိုကောင်းသည့်ရမှတ်ကိုရရှိသည် Samsung terminal အသစ်ထက် Galaxy Note ကို 5။ ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးကိုတူညီသည့် SoC အောက်ရှိတပ်ဆင်ထားသော Samsung Exynos 7420 ပရိုဆက်ဆာနှင့် cores ရှစ်ခုနှင့် 14 nm တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောရမှတ်ရရှိရန်စိတ်ဝင်စားသည်။
ဒီပစ္စည်းဟာဈေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်များရှိသော်လည်း Samsung terminal နှင့်၎င်းရဲ့ဖန်သားပြင်ဟာယုတ်ညံ့သည့်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ Meizu Pro5သို့မဟုတ် Meizu NIUX ဟုလည်းလူသိများသည်တွင် ၅.၅ လက်မ FullHD မျက်နှာပြင်နှင့် Note 5,5a5 လက်မဖန်သားပြင်တို့ပါဝင်သည်။ ဤသည်ဖြစ်ကောင်း device ကိုကိုရီးယား device ကိုထက်ပိုကောင်းတဲ့ရမှတ်များ၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အရ Meizu သည်၎င်း၏ RAM memory ပေါ် မူတည်၍ မူကွဲနှစ်ခုရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်3GB ကို သို့မဟုတ်4GB ကို။ သင်၏အတွင်းသိုလှောင်မှုဖြစ်လိမ့်မည် 32 GB ကို၎င်းတွင်အဓိကကင်မရာနှင့်မှတ်တမ်းတင်ကိရိယာ၏နောက်ဖက်တွင်ရှိသည်။ ၅ megapixelsရှေ့ကင်မရာက5MP ပါ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မှတ်ချက်ပေးရန်မှာ၎င်းသည် Android 5.1 Lollipop အောက်ရှိ Flyme ၏စိတ်ကြိုက်အလွှာအောက်တွင်ရှိသည်။ ယခုစက်ကိရိယာအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်လာမည့်စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်အထိစောင့်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Meizu » Meizu Pro5သည် Geekbench ရှိ Galaxy Note5ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်
Alexis, အမှန်မှာ MEIZU PRO5သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုပြီးလျှင်၎င်းသည်မိုဘိုင်းဖုန်းကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာဤမိုဘိုင်းနှင့်အနာဂတ် XIAOMI MI1 PLUS အကြားဖြစ်သည်။ မင်းထင်မြင်ချက်ကဘာလဲ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အော်စကာ Jimenez Garrido ဟုသူကပြောသည်
မှတ်စု။ မျက်နှာပြင်နှစ်ခုအကြားကွာခြားမှုမှာ Meizu နှင့် Samsung တို့ဖြစ်ပြီးနှစ်ခုလက်မခြား။ ကန့်သတ်မထားပါ။ Meizu တွင် Resolution 1080 × 1920 pixels နှင့် Samsung မှာ 1440 × 2560 ရှိသည်။ ငွေဖြင့်ပြောဆိုခြင်းသည်တူညီသော desktop PC နှစ်ခုကိုအခြေအနေတူအခြေအနေများတွင်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အတူတူပင်ပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုရန်ထားပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့အနက်တစ်ခုမှာ 1080 monitor နှင့်နောက်တစ်ခုကို 2560 monitor နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော resolution များနှင့်အညီပြင်ဆင်ထားသည်။ နှစ်ခုရိုးရှင်းသောဘုံသဘောအရပိုမိုကောင်းမွန်ပြေး။ စာဖြင့်ရေးသားထားသည့်အတိုင်း၊ ဤမှတ်စု / ဆောင်းပါးသည်မှားယွင်းမှုကြောင့်အလွန်မှားယွင်းနေသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအချိန်နှင့်အမျှကျပန်းအမှားတစ်ခုအဖြစ်ထင်မြင်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းမှတ်ချက်ပေးသူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမြင့်မားတဲ့ resolution ဟာမိုဘိုင်းဖန်သားပြင်နဲ့ etcetera, etcetera တွေမှာအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာအမြဲတမ်းငါပြောခဲ့သည့်အတိုင်း - ဆာဗာတစ်ခုတွင် - သူကကာတွန်းဆရာတစ်ယောက်ပါ။ ရိုးရိုးဝါသနာမပါဘဲငါဝင်ငွေနဲ့ဝင်ငွေရှာတယ်။ ဖုန်းဖွင့်ရန်၊ ဗီဒီယိုကြည့်ရန်၊ surf လုပ်ရန်၊ WhatsApp နှင့် Facebook ကိုသာကစားလိုသူများအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ မှန်ပါသည်၊ HD resolution အပြည့်ဖြင့်လုံလောက်သည်၊ ၎င်းမှာများစွာရှိပြီး၎င်းသည် ပို၍ ပင်ကောင်းသည်။ အခုတော့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက်၊ အထူးသဖြင့်ဘောပင်နဲ့ရရှိတဲ့လိုင်းများ၏တိကျမှုတွင်ခြားနားချက်သည် BARBARITY တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသတိပြုမိစေသည်။ နောက်ဆုံးသရုပ်ဖော်ပုံများရေးဆွဲခြင်းသည် phablet သည်အသင့်တော်ဆုံးပုံစံမဟုတ်သော်လည်းသတိထားပါ၊ ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ပုံကြမ်းများ၊ ရေးစပ်မှုများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ဇာတ်ကောင်များ၏ဒီဇိုင်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စကားလုံးကအခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်၊ အသုံးမ ၀ င်တော့ဘူး၊ ကစားစရာကမင်းရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်ပေးတယ်၊
Note နှင့်ပြနာကအခု ၅ နှင့်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုဥရောပကပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းနှင့်အတူအကျိုးဆက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရသည်။ အစမှ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သောသူများအတွက်အတွေးနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်းကြီးမားသောအော်ပရေတာကြီးများကအခိုင်အမာနားမလည်သော terminal ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကိုရောင်းချခြင်း - ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူကိုအခြားရောင်းသူများလိုမျိုးရိုးရိုးရှင်းရှင်းအမြင့်ဆုံးအဖြစ်ရောင်းချခြင်း။ အကျိုးဆက်ကားအဘယ်နည်း။ သုံးစွဲသူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ဆာဗာကဲ့သို့သောဖန်တီးသူပညာရှင်များနှင့်သရုပ်ဖော်သူများကကလောင်အမည်ကိုသုံးလေ့ရှိပြီးကျန်သူများမှာမူကိုယ်ပိုင်အပန်းဖြေစင်တာအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဒါတွေအားလုံးကြောင့် Samsung က WORK terminal အတွက် Note5- Barbarity and stupidity မှတိုးချဲ့ခြင်း slot ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီ၊ သူတို့ကသူတို့ပေးတဲ့ internal memory နဲ့အတူနောက်ဆုံးပေါ် Modern Combat, Asphalt, နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုံလောက်လောက်အောင်များပါတယ်။ အနည်းငယ်မျှဂိမ်းများနှင့်စံပျမ်းမျှအားအသုံးပြုသူနှင့် hala ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဗီဒီယိုများ, မိုင်ပစ်ရန် ... နှင့်အထက်, ဥရောပ၌, ထိုပင်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ စုစုပေါင်းပြောခဲ့တာတွေအတွက် S5 edge + right? ကောင်းပြီ၊ သင့်စမ်းသပ်မှု၏ပထမဆုံးဗားရှင်းများကိုအရေးပါသောအောင်မြင်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပစ်လိုက်သောသစ္စာရှိဖောက်သည်များ၊ အရောင်းအောင်မြင်မှုမရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားလေတိုက်စေသည်။
Oscar Jimenez Garrido အားပြန်ပြောပါ
သင်၏ Android တွင် NDS အတွက်မူလဂိမ်းကိုအခမဲ့ကစားခြင်းဖြင့် Super Mario Bros ၏နှစ် ၃၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကျင်းပပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုပြတယ်
Galaxy S7 ကို Exynos 8890 ဖြင့်အခြေခံစံနှုန်းအသစ်ဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်